'ငါလတ်ဆတ်တဲ့သူတွေကို ABSOLUT ပုလင်းတစ်လုံးလုံးချပစ်လိုက်တယ်' - လင်ကွန်းတွင်နေထိုင်သော YOUTUBER LUKE BIRCH - သတင်း
'ငါ Absolut တစ်ပုလင်းလုံးလတ်ဆတ်သောသစ်သီးများကိုချွတ်လိုက်သည်' - လင်ကွန်းရှိ Uni ဘဝကို YouTuber Luke Birch
အကယ်၍ လင်ကွန်းတက္ကသိုလ်ကိုသင်တက်ရောက်မယ်ဆိုရင် Luke Birch ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခု (သို့) နှစ်ခုကိုသင်တွေ့မှာသေချာပါတယ်။ လုကာသည်လင်ကွန်းတွင်မကြာသေးမီကဘွဲ့ရခဲ့ပြီးဗြိတိသျှ YouTubers ၏ 'Studytuber' လောကရှိအထင်ရှားဆုံးသောမျက်နှာများထဲမှ ၂၂ နှစ်အရွယ်ရုပ်ရှင်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောရှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းလုကာသည်အမြင် ၂၆ သန်းကျော်ကိုစုဆောင်းခဲ့သည် သူ၏ချန်နယ် သုံးစွဲသူ ၂၆၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ Lincoln Tab သည် Luke Birch အားလင်ကွန်းတွင်ပညာသင်စဉ်သူ၏အချိန်အကြောင်းကိုပြောခဲ့သည်။
လင်ကွန်းမှာပညာသင်ရတာမယုံနိုင်စရာပဲ။ ငါကျောင်းဝင်းဘယ်လောက်ခေတ်မီတယ်ဆိုတာကိုငါချစ်တယ်၊ ငါ့ကထိကတွေကိုချစ်တယ်။ သို့သော်အရာအားလုံးထက်အထက်ပါစာကြည့်တိုက်သည်ကျွန်ုပ်လင်ကွန်းတွင်လေ့လာသည့်အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးကချစ်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်စာကြည့်တိုက်ကအဲဒီလိုစစ်မှန်တဲ့တကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲရှိခဲ့တယ်။ ငါကစာကြည့်တိုက်ကိုချစ်မြတ်နိုးလာတယ်။
အဘယ်သူသည်လင်ကွန်းအတွက်အမှတ်ရစရာညဥ့်ထွက်မထားဘူး?! (အထူးသဖြင့် Fresher ရဲ့အပတ်အတွက်) အချို့အရူးညဆက်ဆက်ရှိခဲ့သည်။ ငါ Raspberry Absolute ဗော့ဒ်ကာတစ်ဘူးလုံးကိုနှိမ့်ချလိုက်တာကိုမှတ်မိနေတယ်၊ ကျွန်တော့်အဖော်တွေနဲ့ကျွန်တော် SuperBull ကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်မလွှဲမရှောင်သာခံစားရတယ်၊ ပစ်ချဖို့လိုတယ်။ ငါနှင့်အတူစွန့်ခွာရန်ငါ့အတိုက်ခန်းဖော်တောင်းပန်ပေမယ့်အကြွေးရဲ့ဘယ်မှာအကြွေးကြောင့်ကျနော်တို့လိုင်းအတွက်စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်အတွင်းပိုင်းတယ်နှင့်သူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားကြဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူး။
အချို့သောထူးထူးဆန်းဆန်းအကြောင်းပြချက်များအတွက် - ပရမ်းပတာဖြစ်သည့်ထပ်တိုးရန်ထိုညသည်လင်ကွန်းရှိကျောင်းသားများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်စကားပြောနေသည့်တစ်ခုတည်းသောညဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ YouTube ဗီဒီယိုအကြောင်းပြောပါမည်။ အချို့လူများကဓာတ်ပုံရိုက်ချင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏ရုပ်သံလိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုရန်ကောင်းသည့်သူတစ် ဦး ဦး နှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံသည့်အခါတိုင်းသူတို့နှင့်စကားပြောရန်၊ သူတို့အကြောင်း၊ သူတို့၏ဇာတ်လမ်း၊ ဘွဲ့အကြောင်းသိရန်အမြဲတမ်းနှစ်သက်သည်။ ဒါပေမဲ့ဒီဥပမာကနေငါထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ငါအိမ်ပြန်, ငါ့တံခါးကိုသော့ခတ်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျော်အန်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါအရမ်းပင်ပန်းနေတဲ့အတွက်မနက်ခင်းအထိမျှအောင်ထားခဲ့တယ်။ ဒါဟာရှုပ်ထွေးတယ် ဘယ်တော့မှမ
ဒါဟာဒုတိယနှစ်မတ်လမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ငါဟာကံကောင်းတာကလေကြောင်းလိုင်းနဲ့စပွန်ဆာပေးဖို့ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးအကုန်လုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ငါ့အဖော်တွေနှစ်ယောက်ကတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ Malaga ကိုထွက်လာတဲ့လေကြောင်းလိုင်းနဲ့အတူအိတ်ထဲထည့်ထားတာ။ ဒါဟာလုံးဝ bonkers ဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်၏ Youtube နှင့် Uni အလုပ်များကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲခဲ့သနည်း။
ဒါဟာတကယ်ကိုအတော်လေးစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့သည်။ YouTube ရှိ StudyTube အသိုင်းအဝိုင်းတွင်ရှိနေခြင်းကကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့တာဘဝ၌သို့မဟုတ်လေ့လာခြင်းနှင့်အတူဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပြီးငှက်နှစ်ကောင်ကိုကျောက်တုံးတစ်တုံးဖြင့်ထိမိစေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ Uni အလုပ်ကို YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာအချိန်ကုန်သက်သာစေရုံသာမကလူအများစုလေ့လာသောကျွန်ုပ်နှင့်အတူဗီဒီယိုများကိုနှစ်သက်ကြောင်းတွေ့ရှိရသောကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ ငါအရမ်းငြီးငွေ့သွားတယ်၊ ငါ့ကိုလေ့လာနေတာကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ယောက်ယောက်ကတစ်နေရာရာကသူတို့ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုအတွက်တစ်နည်းနည်းနဲ့အသုံးဝင်တာကိုတွေ့ခဲ့ရလိမ့်မယ်။
မျှဝေသည် Luke Birch (@lukebirch_) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်၊ ည ၆း၄၂ နာရီတွင် PDT တွင်
တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်မှာ YouTube အလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်တဲ့သူအတွက်အကြံဥာဏ်တစ်ခုခုရှိသလား။
uni မှာရှိနေတုန်း YouTube channel တစ်ခုဖွင့်ချင်သူတိုင်းကိုငါပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ကတော့မင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုဂရုမစိုက်ဖို့ပါပဲ။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကသင်ကိုယ်တိုင်ကျောင်းထွက်တဲ့အခါကျောင်းဝင်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသားအသိုင်းအဝိုင်းကလူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတုန်းပဲ။ သင်ရုံမုန်းတီးမှုမှတ်ချက်များကိုလျစ်လျူရှုရန်ရှိသည်။ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများထက်သာလွန်ကြောင်းအမြဲသတိရပါ။ ငါအမြဲစဉ်းစားလေ့ရှိတယ် '' ဒါကြောင့်ကျောင်းဝင်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာငါ့ဗီဒီယိုတွေကိုလှောင်ပြောင်ကြမယ်ဆိုရင် '' ။ သင်၏ဗီဒီယိုများသည်အခြားကျောင်းသားများ (အချို့သောကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်လုံလောက်သောကံကောင်းထောက်မစွာ) နှင့် YouTube သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဖြစ်လာနိုင်သည့်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသတိရပါ။ ငါ Uni မှာငါ့အချိန်တစ်လျှောက်လုံးငွေရှာနိုင်ခဲ့ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူအများအပြားနှင့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့သည်။ သင်၏ဗွီဒီယိုများသည်ကြည့်ရှုခြင်း ၂ ခုရလျှင်ပင်၎င်းကိုဆက်ထိန်းထားပါ။ YouTube သည်သင်၏ CV ကိုတင်ရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။
အများပြည်သူ / ကျောင်းဝင်းတွင်အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းကိုမည်သို့ခံစားရသနည်း။
အမြဲတမ်းထူးဆန်းတယ် ငါအရမ်းအဆင်မပြေခြင်းနှင့် ဦး နှောက်အာရုံကြောရ။ သို့သော်ကျောင်းဝင်းအတွင်းကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သောလူတိုင်းသည်အလွန်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြင်နာခဲ့ကြပြီးကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းဝင်း၌တွေ့ဆုံခြင်းမှလူများစွာနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရသည်။
မင်းရဲ့ပထမဆုံးနှစ်မှာ Cygnet Wharf မှာနေရတာဘယ်လိုလဲ။
Cygnet ရိုင်းတယ်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အသစ်စက်စက်ဖြစ်ခဲ့သည်၊ တည်နေရာကပြီးပြည့်စုံပြီးကျွန်ုပ်၏သက်ရှိအဖော်များကမိနစ်တိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးပျော်စရာကောင်းသည်။ cygnet ၏အကြီးမားဆုံး con မှာဆူညံသံဖြစ်သည်။ နံရံများစက္ကူပါးလွှာနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်မည်မျှအိပ်မပျော်ခဲ့သည့်ညများကိုသင့်အားမပြောနိုင်ပါ။ Cygnet မှာသင်လိုချင်တာထက်ပိုပြီးကြားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တည်နေရာအထက်တန်းလွှာဖြစ်ပါတယ်။
စက္ကန့်တိုင်းကိုအများဆုံးလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်clichéဖြစ်သည်၊ သို့သော်လင်ကွန်း၏အတွေ့အကြုံသည်သင်မသိမီသွားသည်။ ကျွန်ုပ်ဒုတိယနှင့်တတိယနှစ်တွင်ခရီးများစွာထွက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လင်ကွန်းတွင်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအချိန်အနည်းငယ်ပင်ရှိခဲ့သည်။ ငါ Lincolnshire ကို Uni မှာဘယ်တော့မှစူးစမ်းလေ့လာချင်မှာလဲ။ ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းအချို့တွင်ကားများရှိပြီးခရိုင်တစ်ဝိုက်တွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပိုမိုယူဆောင်သင့်သည်။ တကယ့်ကိုလှတယ်
လင်ကွန်းရှိ LGBTQ + အသံတစ်ခုအနေဖြင့်လက်လှမ်းမီမှုကိုတိုးတက်စေရန်အဘယ်အရာပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ င်ရောက်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် ငါလင်ကွန်းရှိ LGBTQ + လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပိုမိုပါ ၀ င်ပတ်သက်ချင်သည်၊ သို့သော်လေ့လာမှုများ၊ YouTube နှင့်၎င်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်ခက်ခဲလွန်းသည့်အဖော်နှင့်ပါ ၀ င်လိုသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့လင်ကွန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်အချို့လုပ်သည်ကိုသတိပြုမိသည်။ အားလုံးပါ ၀ င်သောနေရာ။ လက်ရှိနှင့်အတိတ်ကျောင်းသားများအတွက် LGBTQ + ဖြစ်ရပ်များ (ကျွန်ုပ်လင်ကွန်းသို့ပြန်လာလိုသောကြောင့်အဆုံးတွင်အလေးပေး) ကိုပိုမိုကြည့်လိုသည်။ လင်ကွန်းမှာပိုမိုစည်းလုံးပြီးကွဲပြားခြားနားတဲ့သင်ယူမှုပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအရမ်းပြင်းလွန်းလို့ကျွန်တော့်ရဲ့ဆံပင်ကိုလောင်စေတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်မှာ Gay Times မဂ္ဂဇင်းကကျွန်တော့်ရဲ့အိပ်မက်ရည်းစားအကြောင်းကိုအင်တာဗျူးခဲ့တာမှတ်မိသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဟာလုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးလိင်တူချစ်သူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးမှာကျွန်တော့်ရဲ့နှလုံးသားကိုသွတ်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ၃ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက် @natemcin ကသင့်ကိုချစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။ ငါမြင်ဖူးသမျှအရာအားလုံးကိုသင်လိုက်သည်။ မင်းအသိဉာဏ်ရှိတယ် မင်းကရည်မှန်းချက်ကြီးတယ် သငျသညျ SO သွေးထွက်သံယိုရယ်စရာပါပဲ။ သင်ဂရုစိုက်နေပါတယ် မင်းမှာ muscly လက်နက်ရှိတယ်။ ငါမဂ္ဂဇင်းထဲကိုငါထည့်ထားပုံကိုအလွန်အကျွံပြောနေတယ်။ မင်းမိဘတွေကိုမင်းသဘောကျ ထို့ထက်ကား၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကို 5000 & ကျော်လွန်ပြီးချစ်ကြတယ်။ ငါတို့ကိုခွဲထားသောမိုင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်
မျှဝေသည် Luke Birch (@lukebirch_) ၂၀၁၉ မေလ ၁၉ ရက်၊ ညနေ ၁:၅၂ နာရီ၊ PDT တွင်
တစ်စုံတစ်ဦးက tinder ရှိပါတယ်လျှင်ကြည့်ရှုဖို့ဘယ်လို
အိုကေ၊ အမြန်မီးမေးခွန်းများ - Swan သို့မဟုတ် Tower Bar?
Swan, Swan, Swan ။
Snog, လက်ထပ်ထိမ်းမြား, ရှောင်ရှား: SuperBull, Union, Keller?
SuperBull၊ Snog Keller၊ Avoid Union ကိုလက်ထပ်ပါ။
ကျိန်းသေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါကာလအတွင်းထွက်ခွာ။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများ၊ အိမ်ဖော်များနှင့်ကထိကများကိုလေလံဆွဲရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်မပြည့်စုံခံစားရတယ်, အဲဒီမှာအဘယ်သူမျှမပိတ်သိမ်းရှိပါတယ်။ ငါနွေရာသီအပြီး (အထူးသဖြင့်ကျောင်းဆင်းပွဲရွှေ့ဆိုင်းထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်) ပြန် Uni သို့ ဦး တည်လိမ့်မယ်နဲ့တူငါနေဆဲခံစားရတယ်။ လင်ကွန်းသည်ငါ့ဘဝရှိစိတ်ဖိစီးမှုအားလုံး၏ဗဟိုချက်မဖြစ်ဟန်တူသည်တခါတရံသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုရာသက်ပန်သူငယ်ချင်းများဆီပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ငါမြို့တော်ကိုချစ်တယ်, ငါတကယ်ဖြစ်စေကြောင်းမှနှုတ်ဆက်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးဇွန်းမရှိပါ အဘယ်သူမျှမကနောက်ဆုံး Greggs ခရီးစဉ်။ နောက်ဆုံး Waga မရှိပါ။ နောက်ဆုံးညမထွက်ဘူး အံ့ to စရာဖြစ်ဖို့မလိုပေ။
စိတ်ပူရမည့်လင်ကွန်းသို့လာသည့် LGBTQ + အသိုင်းအဝိုင်းမှလူများအတွက်သင်၏အကြံဥာဏ်ကဘာလဲ။
မဖြစ်ဘူး လွယ်လွယ်ပြောရရင်ငါပြောပြီးတာနဲ့ပြောတာကလွယ်ပါတယ်၊ သေချာတာပေါ့၊ အဲဒါဟာလူတိုင်းလူတိုင်းတန်းတူနေထိုင်နိုင်မယ့်လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အနာဂတ်အိပ်မက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ကိုယ်တိုင် Uni ကိုမခံစားချင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြနေသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်နေရာမှာမှမရှိ။ အနည်းဆုံးတော့။ သို့တိုင်လင်ကွန်းတွင်ကျွန်ုပ်အမြဲကြိုဆိုခဲ့သည်။ လင်ကွန်းမှာ LGBTQ + အသိုင်းအ ၀ ိုင်းရှိတယ်၊ လိင်တူချစ်သူဘားရှိတယ်၊ လိင်မှုကိစ္စဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါစေ၊ လင်ကွန်းတက္ကသိုလ်မှာကြိုဆိုပါလိမ့်မယ်။